Al-Shabaab ayaa markale waxaa ay todobaad gudihiis weerar ka fuliyeen deegaano ka tirsan gudaha dalka kenya | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Al-Shabaab ayaa markale waxaa ay todobaad gudihiis weerar ka fuliyeen deegaano ka...
Al-Shabaab ayaa markale waxaa ay todobaad gudihiis weerar ka fuliyeen deegaano ka tirsan gudaha dalka kenya
Al-Shabaab ayaa markale waxaa ay todobaad gudihiis weerar ka fuliyeen deegaano ka tirsan gudaha dalka kenya,waxaana ay weerar ka geysteen deegaan duleedka ka ah magaalada Gaarisa xarunta gobolka Waqooyi Bari ee dalkaas Kenya.
Taliye ku xigeenka Booliska magaalada Gaarisa, Kibet Bowen ayaa sheegay in Xubno ka tirsan Al-Shabaab ay soo weerareen Saldhig ay Ciidamada Booliska Kenya ku leeyihiin xaafadda Saretho oo u dhow xerada qaxootiga ee Dhadhaab ee Gobolka Waqooyi Bari.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in ay weerarkaas ka hortageen,isla markaana ay dileen laba kamid ah Xubnaha Al-Shabaab ee weerarka salhdiga kusoo qaadey walow fah faahin intaasi kasoo dheer uusan bixin.
Dhinaca kale Al-Shabaab oo sheegtay mas’uuliyada weerarkaas ayaa waxaa ay sheegeen inay dileen laba askari oo ka tirsan Ciidamada Booliska Kenya,sidoo kalena ay gubeen Xarun ay leedahay Shirkadda Isgaariinta Safaricom.
Waa weerarkii saddexaad oo todobaad gudihiis ay Al-Shabaab ka fuliyaan Gudaha Kenya,waxaana ay horey uga fuliyeen Xerada Ciidamada Cirka ee Kenya iyo Mareykanka ku leeyihiin Gobolka lamu.